जोगी, ब्यापारी र मगन्तेका नाममा अपराधी र जासुस छ्याप्छ्याप्ती ! « Khasokhas Follow @khasokhasmag
जोगी, ब्यापारी र मगन्तेका नाममा अपराधी र जासुस छ्याप्छ्याप्ती !
उपत्यका लगायत नेपालको बिभिन्न भागमा विगत केही समयदेखि अस्वाभाविक रुपमा जोगी र मगन्तेको भेषमा मानिसहरु छ्याप्छ्याप्ती देखिन थालेका छन् ।
कालो कपडामा जोगी जस्तो लाग्ने कैयन मानिसहरु मन्दिर, विदेशी दूतावास आसपासदेखि मुख्य बजारमा यत्र त्यत्र ठुलो संख्यामा देखिन थालेका छन् । उनीहरुलेहरु असामान्य रुपमा जबर्जस्ती पैसा माग्ने र खासगरी विदेशी पर्यटकलाई धेरै लामो पछ्याउने र पैसा नदिए गाली गर्ने समेत गर्दछन् । सरकारी अफिस र सिंहदरवारभित्र समेत घुसेर पैसा माग्दै गरेको समेत पाइएको छ ।
सामाजिक अभियन्ता शेखर ढुंगेल भन्नुहुन्छ – ‘उनीहरुलाई कसैले ल्याएर जासुसका रुपमा छाडेको समेत हुनसक्छ । उनीहरुले अपराधीलाई सघाउन जासुसका रुपमा समेत काम गरेका हुनसक्छन् । यसबारे राज्यको ध्यान जान जरुरी छ ।’
उनीहरुमध्ये कैयनले नेपाली, हिन्दी, भोजपूरी वा मैथली भाषासमेत बुझ्दैनन् । शहरमा यस्तो मानिसको बृद्धिले शहरमा असुविधा मात्र भएको छैन, घर पसलको सुरक्षामा समेत असर पारिरहेको छ ।
उनीहरुमध्ये कैयन सामान बेच्ने वा पैसा माग्ने बहानामा घरभित्र सिधै घुस्ने गरेका छन् ।
शेखर ढुंगेल भन्नुहुन्छ – ‘घरभित्र पसेर चोरी गर्ने वा ज्यानै लिनेसम्मका घटना समेत हुनसक्ने भएकाले सावधान हुन जरुरी छ । अपराधी र जासुस नभएपनि सडकमा पछ्याएर जबर्जस्ती माग्ने गर्दा विदेशीका अगागि लज्जा र सामाजिक बिकृति बढिरहेको छ ।’
पसल पसलमा पुगेर कहिले एक्लै त कहिले सामुहिक रुपमा माग्ने तथा पैसा नदिए सामान समेत उठाएर लग्ने गरेको गुनासो ब्यापारीहरुको छ । समयमै सम्बन्धित निकायको ध्यान नपुगे यसले दीर्घकालिन रुपमा नेपाली समाजमा नकारात्मक असर पार्ने तथा सघन समस्याको रुपलिन सक्ने सरोकारवालाको चासो रहेको छ ।